देशभर ४८ हजार ८ सय प्रहरी परिचालन – Saurahaonline.com
देशभर ४८ हजार ८ सय प्रहरी परिचालन
काठमाडौं । तपाईं दसैंमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ ? तपाईंको घर वा डेराको सुरक्षामा शंका छ ? यदि त्यस्तो लाग्छ भने तपाईंले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिएर जानुहोला । तपाईंको घर वा डेराको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्छ ।
‘घर वा डेरामा बहुमूल्य सामान नराख्नुस्, घर वा डेराको सुरक्षामा शंका लागे नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएर जानुस्,’ महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी पोखरेलले राजधानीसँग भने ।
डीआईजी पोखरेलले घर छाड्दा सोबारेको सूचना अथवा फोटो सामाजिक सञ्जालमा नराख्नसमेत भनेका छन् । यस्तै, नजिकका वा विश्वासिलो छिमेकीलाई हेरचाहका लागि आग्रह गर्न पनि भनेका छन् ।
‘कसैले पनि घर वा डेरा छाडेर अन्यत्र जाँदा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने वा फोटो राख्ने नगरौं, त्यसो गर्दा सुरक्षामा असर पर्छ । बरु नजिकको वा विश्वासिलो छिमेकीलाई हेरचाह गर्न भनौं,’ डीआईजी पोखरेलले भने ।
प्रदेश १ मा ७ हजार ९ सय २२ जना प्रहरी खटाइएको छ । प्रदेश २ मा ७ हजार ३ सय १० जना, बाग्मती प्रदेशका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा बाहेक ४ हजार १ सय ५३ जना प्रहरी खटाइएको छ ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ७ हजार ८ सय २५ जना, कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार ७ सय १७ जना र सुदूरपश्चिममा ५ हजार ५० प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
यसरी खटिने प्रहरीहरूले देशभर ४ सय ९० स्थानमा चेकजाँच गर्नेछन् भने २ सय ६४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ।